अनुवाद Archives - खबरम्यागजिन
19 सेप्टेम्बर 1927 –मा उत्तरप्रदेशको फैजाबादमा जन्मेका तथा ‘नयाँ कविता’-का सशक्त हस्ताक्षर कुँवर नारायण अज्ञेयद्वारा सम्पादित ‘तीसरा सप्तक’ (1959) –का प्रमुख कविहरूमध्ये एक थिए। कवि कुँवर आफ्ना रचनाहरूमा इतिहास र मिथकमार्फत् वर्तमानलाई हेर्न चाहन्थे। शुरुमा […]
मानौँ जोन लेन्नन मानौं कुनै स्वर्ग छैन कोशिश गरे सजिलो छ। हामीमुनि नर्क छैन हामीमाथि केवल नभ छ। मानौं सबै मान्छे यहाँ आजको निम्ति बाँचेको। मानौं कुनै देश छैन गर्नु यसो गाह्रो […]
नावारुण भट्टाचार्य एउटा रोटीभित्र कति भोक हुन्छ? एउटा जेलले कति इच्छालाई रोक्न सक्छ ? एउटा अस्पतालको ओछ्‌यानमा कति कष्टहरू एक्लै सुतेको छ? एक थोपाभित्र कति समुद्र छ? एउटा चरा मर्दा कति आकाश बॉंकी रहन्छ? एक […]
बन्द खोल्ने नखोल्नेबारे निर्णय गर्ने दायित्व मोर्चाको हो- विमल गुरूङ (19,142)